Waa kee saxiixa bartilmaameedka koowaad u ah suuqa xagaagan Kooxda Manchester United? – Gool FM
(Manchester) 06 Abril 2020. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Manchester United, waxaa weli bartilmaameedka koowaad ee dhanka suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan ka dhiganaysa ciyaaryahan Jack Grealish.
Kabtanka kooxda Aston Villa ee Jack Grealish ayaa la soo sheegayaa inuu weli sii joogtaynayo u yahay bartilmaameedka koowaad ee Manchester United suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
24-sano jirkaan ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu u dhaqaaqayo garoonka Old Trafford dhammaadka xilli ciyaareedka, kaddib markii uu gacan ka gaystay 13 gool oo horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha noqotee, Man United ayaa lagu xamanayaa inay dib uga fiirsatay dalab 80 milyan oo gini ah, kaddib markii Grealish lagu qasbay inuu bixiyo raaligelin markii uu bannaanka u soo baxay oo uu jabiyey amarka dowladda inta lagu guda jiray xannibaadda Coronavirus.
Jariiradda Bleacher Report ayaa warinaysa in inkastoo xiddigan Ingriiska ah uu weli halka ugu sarreysa kaga jiro liiska macallin Ole Gunnar Solskjaer, haddana Jadon Sancho iyo Jude Bellingham ay sidoo kale diiradda u saaran Man United.
Grealish, kaasoo ku dhawaaday inuu ku biiro kooxda Tottenham Hotspur sanadkii 2018-kii ayaa haysta qandaraas saddex sanadood oo uu ku sii joogayo kooxda carruurnimadiisa ee Villa.